Mero Kosiky :“Ankavitsiana sisa ny olona liana amin’ny tantara foronina” | NewsMada
Mero Kosiky :“Ankavitsiana sisa ny olona liana amin’ny tantara foronina”
Eo am-piketrehana ny boky tantara foronina “Fararanon’i Aina”, Ranaivoson Andriamiadana Njaka, na i Mero Kosiky, eo amin’ny tontolon’ny haisoratra. Avoitran’ny boky amin’ny ankapobeny ny fiforetana sy ny fikirizana amin’ny fiainana …
Zary tsy dia mahasarika ny ankamaroan’ny olo­na ny famakiana boky, indrindra ny tantara foronina, ankehitriny. Anisan’ny antony iray hanaovan’i Mero Kosiky ezaka ho an’ny literatiora ka hamoahany ny “Fararanon’i Aina” izany. “Anisan’ny dingana haleha ny hisehatra ham­piaina literatiora amin’ny alalan’ny dihy sy hira ary ny sary sy feo. Ankavitsiana sisa ny olona liana amin’ny tantara foronina na amin’ny fanoratana na amin’ny famakiana, indrindra ny amin’ny fiteny malagasy. Karazan’olona tia mijery ny fiainana eny anivon’ny fiarahamonina aho, ma­mantatra izay mety ho karazan-javatra hahaliana ny olo­na, na tsy ny rehetra aza ny ho voasariko ao anatin’izany” hoy izy, nanazava ny vinany manaraka.
Maro ny lalana nodiaviny teo amin’ny tontolon’ny zavakanto. Tao ny fifaninanana nahazoany ny loka voalohany “Amboara Elie Rajaonari­son”, ny fiseharana tamina hetsika maro tao amin’ny Fari­bolana Sandratra sy ny hafa toy ny “Izao no ary”, ny “Za­ra­fana­hy 2015”, ny hetsika sy fa­moaham-boky “Rain­gy I, II, III,” sns.
Miangaly haisoratra sy haikanto hafa ankoatra ny tantara foronina, maro ny karazana haisoratra iangalian’i Mero Kosiky. Ani­san’izany ny poezia, ny sombintantara, ny horonantsary lava sy fohy. Teo koa ny fa­nolorana ny fandaharana Cou­lisses on TV tao amin’ny TV Plus Madagascar, ary mpanatontosa amin’izao fotoana. Efa nampianatra teatra tamina fi­an­gonana. oniversite, sns … Mpi­tarika antoko mpihira Gos­pel ao amin’ny FJKM Fanasim-piderana Antanimena Andrefa­na ny tenany.
“Tokony homena lanja ny mpanoratra, omena toerana ny boky, beazina hitia teny malagasy ny ankizy, velomina ny tantara an-dampihazo ary omena hasina ny teny”, hoy i Mero Kosiky. Nohamafisiny fa tsy ny mpihira ihany no “artista” na mpanakanto. Manana fikasana hamoaka horonantsary miavaka eto Madagasikara ny lehilahy, any aoriana.